Xafladdii Qalin-jebinta sanadlaha ee Jaamacadda Muqdisho oo maanta lagu qabtay Muqdisho. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Xafladdii Qalin-jebinta sanadlaha ee Jaamacadda Muqdisho oo maanta lagu qabtay Muqdisho.
Posted by: radio himilo December 21, 2017
Muqdisho – Xafladda sanadlaha ah ee qalin-jebinta Jaamacadda Muqdisho ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiinta kala duwan ee Jaamacadda, xubno sare oo ka socday dowladda dhexe, arday, barayaal, waalidiin iyo marti sharaf ayaa ku sugnaa xafladda.
Waxaa loo dabaal-degayay dufcadii 17aad ee Jaamacadda ka qalin-jebisa oo isugu jira 703 arday oo 18-ka qeybood ee Jaamacadda ka kala baxay. Waxaa intaas sii dheereyd, 76 kale oo marqaatiga labaad ama master-ka ka qaadanayay Jaamacadda ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa xafladda.
Guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Muqdisho – kaas oo sidoo kale kamid ahaa aas’aasayaashii Jaamacadda – ayaa kamid ah madaxdii xafladda ku sugnaa. Mas’uuliyiintii kala duwanaa ee goobta ka hadlay ayaa bogaadin iyo hambalyaba hawada u mariyay ardaydii kala duwaneyd ee sanadka Jaamacadda ka aflaxda.
Waalidiinta oo iyaguna qeyb muhiim ah ka ahaa xafladda ayaa ka marqaati kacayay miraha ka dhashay dadaalka dheer oo ardaydu ugu danbeyntii ku hantiyeen guusha bilowga ah ee nolosha.
Jaamacadda Muqdisho ayaa kamid ah Jaamacadaha dalka ugu faca weyn taas oo xilli dalku ku jiray xaalado aan la saadaalin karin dhidibada loo aasay. Balse dadaal dheer, Jaamacaddu waxay kusii soctaa soo saarista jiilal ku hubeysan aqoon iyo akhlaaq.
Qeyb kamid ah kaabayaasha nolosha – oo aqoontu ay laf-dhabarta u tahay – Jaamacadda Muqdisho waxay kaalin muhiim ah usoo gashay shacbiga Soomaaliyeed kuwaas oo adeegyadii tacliinta oo dowladnimadii la burburay awgeed – waayi lahaa fursad ay mugdiga uga soo baxaan ileyska nolosha.
Waxaa isla qoray: Mahad Maxamed Ali iyo Zakariya Xasan Maxamed.
Previous: Man Utd oo Real Madrid kula tartameysa doonista xiddiga Chelsea, Eden Hazard.
Next: PSG oo dooneysa in ay Man City ka dul qaaddo saxiixa laacibka Arsenal ee Alexis Sanchez.